Bebhekene ezitolo ekhaya Imishini nge price tags ku-TV, lapho incazelo znachitsya imodeli LED noma LCD, amakhasimende amaningi elahleka. Abaqondi ubuchwepheshe, kunzima ukuba ukhethe ukuthi yiliphi TV engcono Thenga - LED noma LCD, yini umehluko yabo, emihle nemibi. Zama ukuqonda.
Umehluko phakathi LED futhi LCD TV
Ithelevishini adalwe ubuchwepheshe LED, lesiRotuma, ngo-2009, futhi baba zithandwa phakathi abathengi. Eqinisweni, le LCD iphaneli nge ukukhanya ukushintshwa. izibani Traditional (Fluorescent) esikhundleni sazo ku diodes ukukhanya-likhipha LED. Ukuze abathengi, lokhu kwakwenqatshelwe ulilethele izinguquko qualitative kwezobuchwepheshe. Uma ulahlekelwa ukukhetha, i-TV LED kangcono ukuthenga, banake izinhlobo sokukhanyisa. Kubo kunezinhlobo ezimbili. Side iyona eshibhile futhi kulula, ngoba isebenzisa LED izakhi mhlophe kuphela. Kodwa kwasemuva, ibizwa ngokuthi RGB, ezibizayo. Isebenzisa izakhi abomvu, aluhlaza okwesibhakabhaka kanye, okuyinto zitholakala ngemva iphaneli LCD TV. Diodes afakiwe kuncike izithombe umbala esikrinini okwamanje. Ngenxa yalokho, lesi sithombe libukhali futhi licace kakhulu ezivamile LCD TV.
Ngaphambi ukuza isinqumo okuyinto TV kungcono ukuthenga, sicabangele izinzuzo undoubted ka LED. Ziyakwazi ukonga ezingaphezu kuka-LCD ezivamile futhi Wawafanisa kudla ugesi izikhathi 2 ezincane. Kusukela diodes zingenalo mercury TV LED ziphephile. Siyabonga entsha ubuchwepheshe panel TV babe ohlabayo. Nge ukushuba esingaphansi amamilimitha angu eziyishumi, izikrini ezifana sezifana izithombe, okungase hung obondeni.
Okuwukuphela ethile sína LED TV - kuba nezindleko zazo eziphakeme.
Ama-LCD TV kanye nezinzuzo zabo
Uma ungazi ukuthi kufanele akhethe futhi yini enye engcono ukuthenga TV, kuyinto ngijwayele LCD onobuhle, noma, njengoba zibizwa kanjalo LCD TV. Ziyakwazi ezikhanga kakhulu ukuze ithengwe.
Ubuchwepheshe banamuhla benza kuye kwafinyelela izinga lapho kuyalinqoba nebubi (ezincane engela umbono, ukutubeka Amaphikseli) futhi ikhwalithi yesithombe kuyamjabulisa. Amanani iwe ngezikhathi ezithile, okuyinto futhi uheha abathengi ukuba amamodeli we-LCD TV.
Ama-LCD TV yakhiwa izingqimba eziningana ezenziwe ngengilazi. A ungqimba of crystal liquid phakathi. Izihlungi, umbala kanye nokwehlukana, zisetshenziswa ingilazi amapuleti. TV ngokwayo kuqokonyiswa panel kwasemuva ekhethekile, ukuze ukukhanya liba umbala ufuna futhi ubonisa isithombe. zinhlayiya Liquid zilawulwa TFT ubuchwepheshe - mncane-ifilimu transistors. Futhi ngamunye wabo elawula iphikseli eyodwa. Ngakho-ke, ku-lonke screen ngesikhathi esifanayo ekushintsheni isithombe.
Njengoba bakhethe esivuna LCD, umbuzo usalokhu uwukuthi: lokho kungcono ukuthenga i-TV-LCD nalokho imingcele ukubheka. Ngokukhetha elikhulu TV idayagonali, kubalulekile ukuba uqale kusukela indawo egumbini, lapho kuyoba. Ngokuvamile wathenga oyisibonelo idayagonali ezisukela amathathu ukuba ayisithupha amayintshi. Kodwa TV kakhulu, ayanda intengo.
Ezinconyiwe isikrini format - eyishumi nesithupha kwabayisishiyagalolunye. Ukulungiswa LCD TV - inombolo Amaphikseli esikrinini, likhula ne idayagonali. Aphakeme kakhulu isithombe ukucaciseleka inikezwa ngesikhathi idayagonali ngaphezu kwamasentimitha angu-ezingamashumi isinqumo 1920 x 1080. Kuyaphawuleka, "isikhathi impendulo". Enough ukubukwa ntofontofo ka millisecond eziyishumi.
Ngakho, ekhuluma ngalokho okushiwo emihle nemibi LED futhi LCD, kubalulekile ukuba bafinyelele esiphethweni: okuyinto TV Kungcono ukuthenga, futhi kanjani hhayi ukuthi usephutheni bakwazi ukuzikhethela abayithandayo. Ithelevishini adalwe ubuchwepheshe LED, sibonga yayo izindleko-inzuzo, kodwa ngenye indlela - izinga isithombe, imibala, isikhathi LCD impendulo nama-TV LED musa ihluke nomunye. It kuyahlukahluka kuphela intengo. Manje ngoba sewuyazi ukuthi izinzuzo nezingozi zanamuhla TV amasethi, ungenza okukhethayo siqu.
Hand Held Metal Detector (umtshina) wokuhlola: kukhethwa sha, incazelo kanye nokubuyekeza
Aiwa - umculo isikhungo audiophiles kweqiniso
Fil Raffin - Usomabhizinisi American: Biography, empilweni yakho
Manicure ingcina tape
Gestalt - kuyini? Gestalt Ukwelashwa: amasu
Amaphethini phezu ingilazi: indlela yokwenza? Yenza ukuthi iphethini kwi ingilazi ngezandla zakhe
Dream Umhlaba Resort & Spa 5 * (Turkey / Side) - izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa
Ingabe succinic acid nge Hangover? Izibuyekezo isicelo succinic acid